ne admin pane 20-07-21
Kusvika pari zvino, vashandi vaifanirwa kuratidza zvinogutsa kuti vakatapukirwa pabasa. Asi nyika gumi neshanu dzave kufunga kuisa basa pachipatara: Ita kuti zviratidze kuti mushandi haana kuwana chirwere pabasa. Chimwe chezvinhu zvakawanda izvo zvinoita coronavirus chirwere 2019 (COVID-19) ...
EPA Greenlights Lysol Disinfectant Spray yekurwisa COVID-19
Iyo Environmental Protection Agency (EPA) yakabvumidza Lysol Disinfectant Spray kurwisa SARS-CoV-2, hutachiona hunokonzera coronavirus chirwere 2019 (COVID-19). Environmental Protection Agency (EPA) yakabvumidza Lysol Disinfectant Spray kurwisa SARS-CoV-2, hutachiona hunokonzera coronavirus ...
Unyanzvi hweNursing Zvivakwa Gara Uchiri Munjodzi kune COVID-19
Pane chishuwo chakasimba chekupa maSNF nezvimwe zviwanikwa, kwete chete maererano nemidziyo yekuzvidzivirira, asiwo yakakosha hutachiona hwekudzivirira zviwanikwa uye vashandi. Kubva kutanga kwechirwere cheSARS-CoV-2 / COVID-19 muUnited States, isu takagara tichiziva kutambura ...